Hypersexuality စွဲခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း - Phenomenology, Neurogenetics and Epigenetics (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-စည်းမျဉ်းခန့်မှန်းကြောင်းအချို့သက်သေအထောက်အထားများကို Prause ရဲ့အဖွဲ့က electrophysiological-based လေ့လာမှုများ, ၏နံပါတ်ရှိပါသည် ။ ဤရွေ့ကားစုံစမ်းစစ်ဆေးလည်း VSS တုံ့ပြန်အောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ (LPP) ပြသခဲ့သည်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပေးပို့သူကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) ၏မိမိတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကိုသတင်းပို့ subjects အခြားအလုပ်အတွက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီပုံစံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမော်ဒယ်များမှသည်ကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်ကြောင်းအဆိုပြု .
“ Prause's group” မှ EEG စာတမ်းနှစ်ခုသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်များနှင့် (YBOP အပါအ ၀ င်) အခြားသူများအပေါ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ အဖြစ်မှန်၌စာတမ်းနှစ်ခုလုံးမှတွေ့ရှိချက်များသည်စာရေးသူ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောက်ချက်များရှိနေသော်လည်းစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုအတွက်
SPAN Lab မှ Porn လေ့လာမှုအသစ် (၂၀၁၃) တွင်အဘယ်အရာမျှမရှိပါ
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: '' အမြင့် Desire 'သို့မဟုတ်' ရုံ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD အားဖြင့် (2014),
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု-“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲခြင်း၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်း” (၂၀၁၅)
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ (၂၀၁၄)
အဆိုပါ 2015 EEG လေ့လာမှုအဘို့ကိုတွေ့မြင်:
“ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများ Modulation နှင့် 'Porn စွဲ' နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) "၏ဝေဖန်မှု
အကယ်၍ သုတေသီများသည် ဦး ဆောင်စာရေးသူ၏ခေါင်းစီးများကိုအစားထိုးရုံသာမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုများကိုအမှန်တကယ်ဖတ်လျှင်ကောင်းမည်မဟုတ်လော။
ကက်နက် Blum , Rajendra ဃ Badgaiyan , မာကုအက်စ်ရွှေ
Published: အောက်တိုဘာလ 12, 2015 (သမိုင်းကိုကြည့်ပါ)
အဖြစ်ဤဆောင်းပါးကိုကိုးကား: Blum K ကို Badgaiyan RD, ရွှေက MS (အောက်တိုဘာလ 12, 2015) Hypersexuality စွဲနှင့် Withdrawal: Phenomenology, Neurogenetics နှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း။ Cureus7(10): e348 ။ Doi: 10.7759 / cureus.348
Hypersexuality ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောတိုးမြှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများကဤ paraphilic မဟုတ်သောအခြေအနေတွင်အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုများ၊ လူမှုရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများနှင့်ဆင်တူသည်သို့မဟုတ်မည်သို့အမျိုးအစားခွဲခြားမည်နည်းအားအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Hypersexual Disorder သည် paraphilic မဟုတ်သောလိင်အလိုဆန္ဒမမှန်မှုများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသဘောပေါက်နားလည်စေသည်။ Pathophysiological အမြင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၊ အဆိုပါ ventral striatum အတွင်း၌တည်ရှိပြီးနျူကလိယ accumbens, ကိုကင်း, အရက်, နီကိုတင်းနှင့်အစားအစာအဖြစ်ဂီတအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု, ဖျန်ဖြေ။ အမှန်မှာ၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည်မက်လုံးများလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြုအမူများကိုပြဌာန်းထားသည်။ ဤအပြုအမူများတွင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရှာဖွေတူးဖော်သည့်ရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝဆုများပါဝင်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတစ်ခုနောက်မှလိုက်လျှင်မော်တာ၏တုံ့ပြန်မှုသည်ပြင်းအားနှင့်အားတက်လာလိမ့်မည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဂီတ၊ အစားအစာနှင့်လိင်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သောဘုံလုပ်ဆောင်မှုယန္တရား (MOA) ရှိသည်ဟုယူဆနေကြသည်။ လိုအပ်သောစိတ်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ (၃) ခု၏“ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု” အတွက်လူ့မောင်းနှင်မှုသည်အားလုံးသောဘုံမော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအစဉ်အလာများရှိခဲ့လျှင်၊ ကျနော်တို့သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုများပြားလှသောအပေါ်အခြေခံပြီး hypersexual လှုပ်ရှားမှု ဦး နှောက် mesolimbic ဆုလာဘ် circuit ကိုကိုသက်ဝင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအစာနှင့်ဂီတကဲ့သို့အမှန်ပင်ကြောင်းယူဆ။ ထို့အပြင် dopaminergic ဗီဇနှင့်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်း neurotransmitter-related ဗီဇ polymorphic hedonic နှင့် anhedonic အပြုအမူရလဒ်များနှစ် ဦး စလုံးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ hypersexuality ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုနှစ်မျိုးစလုံးအကြောင်းကိုလူသိနည်းပါးသည်။ သို့သော်လိင်စွဲသူများ၏ genotype နှင့်အတူပေါင်းစပ်လက်တွေ့တူရိယာနှင့်အတူအကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးအနာဂတ်လေ့လာမှုများ polymorphic အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားများ၏တိကျသောစပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်သက်သေအထောက်အထားပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။ hypersexuality သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများနှင့်တူညီသည်ဟူသောအမြင်ကိုမထောက်ခံသည့် electrophysiological နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သုတေသီများသည်လက်တွေ့နှင့်ပညာရှင်သိပ္ပံပညာရှင်များအား hypersexual အပြုအမူအား“ ပုံမှန်” ပြုလုပ်ရန်အတွက်တိကျသောမျိုးဗီဇ polymorphisms ကိုပစ်မှတ်ထားသောသဘာဝ dopaminergic agonistic agent များကိုဆန်းစစ်ရန် neuroimaging tools များကို အသုံးပြု၍ သုတေသနပြုလုပ်ရန်အားပေးနေသည်။
နိဒါန်း & နောက်ခံ
ဆက်ဆက်, hypersexual အပြုအမူအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလက်တွေ့နှင့်သုတေသန setting များကိုအတွင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားသည် ။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Rush, ဆေးခန်းအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖခင်တစ်ဦးဆရာဝန်တဦးတည်း  ရစ်ချက်ဗွန် Krafft-Ebing တစ် 19th ရာစုအနောက်တိုင်းဥရောပရှေ့ဆောင် sexologist နှင့် 1948 အတွက် Hirshfeld နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်ဆက်လက် [3-4]။ ဤအစုံစမ်းစစ်ဆေး၏အခြေခံအိမ်ငှား hypersexuality အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ် maladaptive ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မြဲလူမှုရေးအရ deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (s) ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ 1975 ခုနှစ်, တွန်းလှည်းဒွန် Juanism အဖြစ်အခြေအနေကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာ ။ 1969 ခုနှစ်, Allen ကအဲလစ်နှင့် Sagarin ကထောက်ခံအမျိုးသမီးအတွက်ယောက်ျားနှင့် nymphomania များအတွက် satyriasis အကြံပြု [6-7]။ hypersexuality ကို DSM တွင်စိတ်ရောဂါရောဂါမပါ ၀ င်သော်လည်း Kafka, Reid, Bancroft၊ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏စိတ်ဆန္ဒအပါအ ၀ င်ခေတ်ပြိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအတော်များများ၏အလုပ်သည်ဤအခြေအနေကိုသီးခြားရောဂါရှာဖွေရေးအဖွဲ့အနေနှင့်ပါ ၀ င်စေနိုင်သည်။ [8-11].
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်အထိ Medline ဒေတာဘေ့စ်ကိုအင်တာနက်အခြေပြုစာပေရှာဖွေမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အောက်ပါဝေါဟာရများပါဝင်သည်: hypersexual (12), hypersexuality (2015), လိင်စွဲ (170), လိင်စွဲ (479), လိင် Impulsivity (1,652), မသင်မနေရလိင် (1,842), မသင်မနေရလိင် (989), လိင်မတော်မတရား ), paraphilia-related ရောဂါ (946) နှင့်အလွန်အကျွံလိင် (1,512) ။ ဤဆောင်းပါးသည် meta-analysis ထက်တိုတိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဖုံးလွှမ်းထားသောခေါင်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုများကိုကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ မည်သည့်အထူးလေ့လာမှုတွင်မပါဝင်ခြင်းသည်လယ်ကွင်း၏အရေးပါမှုကိုမငြင်းနိုင်ပါ။ နားလည်နိုင်သည်မှာလိင်စွဲလမ်းမှုသည်တကယ့်ရောဂါဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ခိုင်လုံသောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်းပြသရန်အထောက်အထားများပင်ရှိနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆနှင့်မကိုက်ညီသူများရှိသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်လိင်စိတ်စွဲခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ကိုစွဲလမ်းစေခြင်းစသည့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါအဖြစ်ယူဆနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကို neuroimaging, neurogenetics နှင့် epigenetics တို့မှအထောက်အကူပြုသောအထောက်အထားများစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုံကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုသတိပြုမိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျအပြောအဆိုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့် ထပ်မံ၍ သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုအသီးသီးတင်ပြကြသည်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံဖြည့်စွက်ဖို့အတွက်စာပေအချို့ကိုအများသဘောတူညီမှုရရန်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်Augustဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် PUBMED Central ကို“ လိင်သည်တကယ့်စွဲလမ်းမှုလား” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေခဲ့သည်။ နှင့် 782 ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။
လိင်စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာပုံမှန်နေထိုင်မှုကိုနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်လူတစ် ဦး ၏အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောမည်သည့်အတင်းအကျပ်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအားလိင်ဆိုင်ရာမှီခိုမှု၊ မည်သည့်အမည်ဖြင့်မဆိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ဘဝကိုလုံးလုံးလျားလျားလွှမ်းမိုးထားသည့်အတင်းအကျပ်ပြုမူသောအပြုအမူဖြစ်သည်။ လိင်စွဲလမ်းသူများသည်လိင်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အလုပ်များထက်လိင်မှုကိစ္စကိုပိုမို ဦး စားပေးသည်။ လိင်သည်စွဲလမ်းသူဘဝ၏စည်းရုံးရေးနိယာမဖြစ်လာသည်။ သူတို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအပြုအမူများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သူတို့အလွန်မြတ်နိုးသည့်အရာကိုစွန့်လွှတ်လိုကြသည် ။ Hypersexual အလိုဆန္ဒဆက်စပ်နေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အတွက်သုံးစွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အချိန်များ၏ကြိမ်နှုန်း၏တစ်ဦးတစ်သက်တာအကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးအလိုဆန္ဒအတိုင်း delineated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားအတွက်, hypersexual အလိုဆန္ဒ၏အကဲဖြတ် (နိမ့်ဆုံးကြာချိန်အနည်းဆုံးခြောက်လ) အမြင့်မားဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ကာလအဖြစ် Kafka နှင့် Hannen နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (အသက် 15 ပြီးနောက်စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက် / အပတ်) ၏။ တကယ်တော့, hypersexual အလိုဆန္ဒ၏ longitudinal သမိုင်း, စစ်ဆင်ရေးအထက်တွင်အဖြစ်သတ်မှတ်, paraphilias နှင့် paraphilia-related မမှန်များအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျား၏ 72-80% အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် .
Hypersexuality နှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု
ဒါဟာကောင်းစွာလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စာပေများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်တိုကျတှနျးထားသနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လူ့ဖွငျ့လှုံ့ဆျောမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ် capitulated ကြောင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုရှိပါတယ် ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှကြွလာသောအခါယောက်ျားမိန်းမတို့ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များရှိသည်စောဒကတက်ခဲ့ကြ ။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကွဲပြားခြားနားချက်များကိုဖျောပွ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်တိုးလာကြပါပြီ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, တိုးမြှင့အကြိမ်ရေ ပြင်ပမှနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အမြင်အာရုံလိင်စိတ်နိုးထဘို့, တိုးမြှင့ propensity  ပေါ့ပေါ့လိင်ဆီသို့အလိုလိုသဘောထားများ , arousal ၏လွယ်ကူခြင်း နှင့်အခ်ါလှုံ့ဆျောမှု ။ ဆနျ့ကငျြ, အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချက်များအားဖြင့်ပုံဖော်ထားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုခင်းကိုပြသ  နှင့်မျိုးပွားနှင့်ကလေး-ပွုစုပြိုးထောအတွက် သာ. ကြီးမြတ်, ဇီဝဗေဒစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ယာယီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ။ အမျိုးသမီး hypersexuality မှလျော့နည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်  နှင့် Affiliate ဆက်ဆံရေးနှင့်ရေရှည်မိတ်ဖက်ကတိကဝတ်ပေးရန်အဆင်ပြေအောင် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလူဦးရေရဲ့%3ဖို့%6အထိနှောင့်ရှက်ဖို့ခန့်မှန်းသော်လည်း, neurobiological antecedents ၏ကြည်လင်သောနားလည်မှုကန့်သတ်ထားပါသည်  အဖြစ်လက်တွေ့အကဲဖြတ် ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူ, ပူးတွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်အပေါ်ဖတ်နေအားပေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှု၌၎င်း, ကျား, မကွဲပြားမှု [29-30].
ဒါဟာ Kafka နှင့် Hennen ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် , မြဲ hypersexual အပြုအမူများစတင်ခြင်း၏ယုတ်အသက်အရွယ် 18.7 လိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက် 7.2 နှစ်ပေါင်း±ခဲ့ hypersexual အပြုအမူများစတင်ခြင်း၏အသက်အပိုင်းအခြားအသက်အရွယ် 7-46 ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူ၏ဤအမြင့်မားဆုံးတစ်သမတ်တည်းထိန်းသိမ်းထားအကြိမ်ရေ၏ပျမ်းမျှကြာချိန် 12.3 ± 10.1 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကုသမှုရှာသော hypersexual ဖြစ်ခြင်းသည်ဤတက်ကြွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျား၏ယုတ်အသက်အရွယ် 37 ±9နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Hanson, et al ။ ထို့အပြင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် hypersexuality အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အနိမ့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက high-အန္တရာယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူထက်နိမ့် recidivism နှုန်းထားများခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ .
Hypersexuality နှင့် Co-နေကြလို့ပဲပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု
hypersexual ရောဂါနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါကဲ့သို့သောအခြားစှဲ, အကြားမြင့်မား Co-ရောဂါရှိပါတယ် [32-33]။ အထူးသ Garcia ကနှင့် Thibaut အလွန်အကျွံ Non-paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ phenomenology မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါထက်တစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူအဖြစ်ခွဲခြားသင့်ကြောင်းအဆိုပြုထား ။ သူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်လည်းအခြားသူများအဆိုပြုထားအဖြစ်စံစွဲလမ်းမမှန်၏သူတို့အားအတော်လေးနီးစပ်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြ ။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကဤဒေသတွင်ဆက်လက်သုတေသနပြုရန်နှင့် DSM-6 တွင် hypersexual disorder ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအနာဂတ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၊ ရော့ခ် 'n' လိပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုများသည်အတူတူဖြစ်ပြီး Woodstock မှယခုအချိန်အထိဤပေါင်းစပ်မှုများကြောင့်ပွဲတော်များတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစာပေစိတ်ကြွဆေးအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုဒီ stimulatory မူးယစ်ဆေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်စိတ်ကြွဆေးအမျိုးသမီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ ဒီစိတျထဲတှငျ, Holder, et al အတူ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ် ။ သူတို့ကဆန့်ကျင်ပေါ်, စိတ်ကြွဆေးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ facilitated, တွေ့ရှိခဲ့, ဤသက်ရောက်မှုကြောင့် dopaminergic ဂီယာ၏တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သားအိမ်ဟော်မုန်းများနှင့်စိတ်ကြွဆေးများပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်နိုင်သမျှ neurotransmission ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသ, ထိုသူတို့ medial amygdala နှင့် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု activation နှင့်အတူ coupled လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးမြှင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင်နယ်သာလန်ကနေသိပ္ပံပညာရှင်များ Self-ဖော်ထုတ် swingers အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ Co-ရောဂါလေ့လာခဲ့ကြပါပြီ ။ ဤလေ့လာမှု၌, Spauwen, et al ။ swingers ၏ 79% (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးအရက်နှင့်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်) အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံနိဂုံးချုပ်; သူတို့ထဲက 46% မျိုးစုံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ တကယ်တော့, (အရက်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖယ်ထုတ်ပြီး) အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသိသိသာသာယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလွတ်လပ်စွာအမျိုးသမီး swingers, အုပ်စုတစုလိင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်အတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (ကာလသား) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
et al Castelo-ဘရန်ကို။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေလိင်အဓိကစိုးရိမ်ပူပန် (77.6%) ဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်မရိပ်မိကြောင်းအစီရင်ခံ ။ သူတို့ကအစအရက်လိင် (62.3%) ရှိခြင်းဖို့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကသူတို့မှာလည်းအရက်အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးသမီး၏အသက်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် variable ကိုခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ et al Jia, ထိုမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံခြင်းအပါအဝင် psychostimulant နှင့်ဘိန်းဖြူအလွဲသုံးစားပြုသူများအကြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, လိင်တူဆက်ဆံမိတ်ဖက်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, ဘယ်တော့မှသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါလုံခြုံလိင်လေ့ကျင့် .
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအိမ်ငှားထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေး, ကင်း, ဘိန်းဖြူနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါး, non-စွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလှုံ့ဆော်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စွဲမှာ, အတော်လေးကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိ၏ တူညီတဲ့မူးယစ်ဆေးနာတာရှည်အခြေခံပေါ်မှာ anhedonia ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်ပြန်လည်နာလန်ထူအဆင့်စဉ်အတွင်း Post-စွဲအများအပြားကိစ္စများတွင် aphrodisiac ကဲ့သို့သောအပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
"hypersexuality နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြု၍ PubMed ရှာဖွေမှု (၇-၁၉ မှ ၁၅) အရဆောင်းပါးငါးခုသာတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်“ မြင့်မားသောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုရုပ်သိမ်းသည့်လက္ခဏာများ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု၍ အခြားရှာဖွေမှုတစ်ခုတွင်စာရင်းပြုစုထားသောဆောင်းပါး ၂၅ ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ပြန်လည်နာလန်ထူအစီရင်ခံစာတွင်စွဲစားခြင်းနှင့်အချို့အစားအစာများနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence စဉ်အတွင်းစီးကရက်၏အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုအစာစားချင်စိတ် drive ကိုအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းသရုပ်ပြခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်မကြာသေးမီကနှင့် abstinent တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားရွေ့ထားပြီး ။ Bruijnzeel စူးရှ opiate ဆုတ်ခွာအလိုအလျောက် orgasm မှုနိုငျသောစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာရေးလုပ် ။ အရေးကြီးတာက, ဆောင်းပါးထဲမှာ Bruijnzeel မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်နာတာရှည်အထူးကြပ်မတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေဆုတ်ခွာ symptomatology ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက် norepinephrine တိုးပွားလာနေချိန်တွင် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း Kappa opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏ unopposed function ကိုကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းအဆိုပြုထား။
စာပေများတွင်အဆိုပါစာရွက်များဆီးစစ်ဆေးမှုကအတည်ပြုစူးရှနှင့်တာရှညျရုပ်သိမ်းရေးနှင့် abstinence နှင့် ပတ်သက်. ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုတစ်မရှိခြင်းကနေခံစားခဲ့ရသည်။ လက်တွေ့ကုသမှုအစီအစဉ်များကို ပို. ပို. , နှစ်ခုလေ့လာခြင်းသီးခြားကျားမတိကျတဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုပံ့ပိုးဖို့နှစ်ဦးစလုံးလိင်ဆက်ဆံရာမှပြောင်းရွေ့ပါပြီ။ သူတို့ကအစလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအစောပိုင်းနှင့်တာရှညျတိုးဖြေရှင်းရန်ပညာရေးနှင့်အစားအစာနှင့်ကျော်မှပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ကပ်။
Hypersexuality-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပြင်းထန်မှုနှင့် Co-နေကြလို့ပဲပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူအချို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ [41-45]။ ဒီရှာဖွေရေး၏ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့တက်ကြွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံထံမှ abstinence နှင့်ဆက်စပ်အမှန်တကယ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဖော်ပြတစ်ခုတည်းစက္ကူကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ကိုးကားသည့်စာတမ်းများအများစုမှာထိုကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအယှက်နိုင်သည့် opioids, နီကိုတင်း, အမ်ဖီတမင်းနှင့်ကိုကင်းအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, ကနေဆုတ်ခွာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါဝင်ပတ်သက်။
Hypersexuality နှင့် neurogenetics
PubMed ရှာဖွေမှု (၇-၁၉-၁၅) တွင်“ မျိုးဗီဇနှင့် hypersexuality” ဟူသောဝေါဟာရကို အသုံးပြု၍ စာရင်းပြုစုထားသည့်စာတမ်းခြောက်ခုကိုသာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် Kleine-Levin syndrome (KLS) နှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများကိုအာရုံစိုက်ပြီးအလွန်ရှားပါးသောရောဂါဖြစ်ပြီး ၂၇ နှစ်အထိ hypersexuality သည်ကြာရှည်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရကိုယ်ခံစွမ်းအားတုန့်ပြန်မှုရှိသော HLA-DQBl၊ DQBl *7ကို KLS ရှိလူနာများတွင်သိသိသာသာများပြားကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး KLS ၏အန္တရာယ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် [46-47].
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်မျိုးဗီဇ” ဟူသောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုသောအခါဆောင်းပါးပေါင်း ၂,၈၂၆ ကိုစာရင်းပြုစုခဲ့ပြီးအရေးကြီးသော neurogenetic ရှုထောင့်အနည်းငယ်၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာ hedonic နှင့် anhedonic အပြုအမူတွေကိုနှစ် ဦး စလုံးသည်ဤအပြုအမူများအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီရဲ့အန္တရာယ် alleles ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ရလဒ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့ကုသမှုသင့်လျော်စွာသည်ဤဖော်ထုတ် polymorphic ပစ်မှတ်ထားပါဝင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကုသမှုတုန့်ပြန်မှုသည်ဤစွန့်စားမှုဆိုင်ရာ alleles များပေါ်တွင်လည်းမူတည်ပြီး pharmacogenetic testing and pharmacogenomic / nutrigenomic solution များအတွက်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
et al Blum ကအငြင်းပွားဖွယ်ကနဦးတွေ့ရှိချက်အောက်ပါ။ အဆိုပါ DRD1990 အယ်လ် allele နှင့်ပြင်းထန်သောရက်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ပထမဦးဆုံးအထောက်အထား2အတွက် PubMed အတွက် 3,938 ဆောင်းပါးများ (7-19-15) ရှိပါပြီ ။ အဆိုပါလေ့လာမှုစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ polymorphic, အ DRD2 အယ်လ် allele နှင့်ဆက်စပ်နေသောအပြုအမူတွေနဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ အထူးသဖြင့် dopaminergic လမ်းကြောင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံခံ loci အတွက် mesolimbic activation များအတွက်လွှမ်းမိုးသောသက်သေအထောက်အထားများ, ရှိနေသော်လည်းဒီနှင့်အခြားဆက်စပ်ဗီဇမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုချိတ်ဆက်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးနည်းပါးသို့သော်ရှိပါသည်။ ဒါဟာ Blum နှင့် Noble မှန်ကန်စွာအားလုံးဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ (RDS) အပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦး generalized ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇအဖြစ် DRD2 ဗီဇခွဲခြားကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, Taq အယ်လ် allele ၏ Bayesian theorem ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသယ်ဆောင်သုံးပြီးသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာကျော်, သူတို့ကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ (RDS) အပြုအမူနှင့်အတူ rendezvous လိမ့်မယ်တဲ့ 74% အခွင့်အလမ်း, ရပါလိမ့်မယ် .
မည်သည့်မျိုးဗီဇ polymorphic နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပထမဦးဆုံးအသင်းအဖွဲ့သည့်အခါ Miller က et al 1999 သည်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ အချို့သော dopaminergic ဗီဇအကဲဖြတ် ။ အခြေခံတွေ့ရှိချက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopaminergic စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံ (AFSI) မှာ DL, D2 နှင့် D4 dopamine receptors နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အမျိုးဗီဇအကြားဆက်ဆံရေး 414 Non-ဟစ်စပန်းနစ်, ဥရောပ-အမေရိကန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနမူနာများတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခု DRD2 allele နှင့် AFSI နှင့် DRD2 allele တစ် DRDl allele နှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါတစ်ပင်အားကောင်းအသင်းအဖွဲ့များအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသတ်ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်ခန့်မှန်းအဖြစ်လိင်ကိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုတစ်စုကို အသုံးပြု. AFSI ခန့်မှန်းဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ဒီ model ဖို့ DRD2 နှင့် DRD2-by-DRD1 ခန့်မှန်းထည့်သွင်းခြင်းအသီးသီး 23% နှင့် 55% အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကှဲလှဲတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးအကြားထက်အထီးအကြားပိုမိုအားကောင်းအသင်းအဖွဲ့အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုဖေါ်ပြခြင်းတခြားသူတွေရဲ့မကြာသေးခင်ကအလုပ်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏အကြံပြုဆိုတဲ့အချက်ကို ။ ထို့ကြောင့်“ ယောက်ျားများသည်အင်္ဂါဂြိုဟ်မှအမျိုးသမီးများနှင့် Venus မှအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်” ဖြစ်ရာကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည် .
အထူးသ preclinical နှင့်လက်တွေ့နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများကိုကင်းစွဲလုပ်ငန်းစဉ် (induction, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse) ၏အားလုံးအဆင့်အတွက်ကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင် dimorphic ပုံစံများကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရုပ်ပုံကိုကင်းစွဲအတွက်လိင်-တိကျတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဇီဝအခြေခံရှိကွောငျးအကြံပြုပေးသောထွန်းသစ်စသည်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို gonadal ဟော်မုန်းအားဖြင့် CNS ၏မတူညီသောစည်းမျဉ်းကနေရလဒ်နှင့် DRD2 ဗီဇ polymorphic ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါ ။ ထို့အပွငျက COMT နှင့်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ရောဂါ phenotypes အကြားမျိုးရိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့များမကြာခဏအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားခြားနားချက်များကိုပြသကြောင်းလူသိများသည်။ ဤအလုပ်လုပ်တဲ့ Val (158) အမျိုးသားများတွင် obsessive-compulsive ရောဂါနဲ့အတူနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန် phenotypes နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ COMT အတွက် polymorphic တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် COMT အတွက် Val (158) Met polymorphic မိန်းကလေးတွေထက်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်သိမြင်မှု function ကိုအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် .
et al Miller က။ တစ်ဦးဟာ DRD4 မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်သည့် polymorphic ၏အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံ၏အသက်အရွယ်မတှေ့ ။ သို့သော်အချို့သူများသည်အချို့သောတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများတွင်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အထူးသဖြင့် DRD4 ရှိ polymorphic များကိုသူတို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ - 3R မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အတူရှိသူများသည်အခြား (သို့မဟုတ် - 4R) မျိုးနွယ်စုအားလုံးမှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလိင်တူဆက်ဆံသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် (n = 2,552) ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ပထမ ဦး ဆုံးလိင်မှုကိစ္စအန္တရာယ်သည်အာဖရိကန် - အမေရိကန်နမူနာရှိမျိုးရိုးဗီဇပုံစံနှစ်မျိုးနှင့်မတူပါ။ .
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ာင်း (NAc) နှင့် dorsal striatum အပါအဝင်ရေရှည်အပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်သည်။ Bradley, et al ။ အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရှာတွေ့ဟမ်းစတားလေ့လာဖို့ microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး differential တက်သို့မဟုတ်ဆင်း NAc အတွက်မျိုးဗီဇတစ်ခုစီးရီး mRNA စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ ။ သူတို့ကလိင်ကနုံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အပတ်7အပေါ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးကိုလက်ခံရရှိလိင်ကြုံတွေ့ဟမ်းစတားမျိုးဗီဇ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တိုးပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်အပတ်7အပေါ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအထီးမခံမလိင်ကြုံတွေ့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအများအပြားမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်လျှော့ချရေးပြ။ စာရေးသူအဆိုအရအမျိုးသမီးဟမ်းစတား၌ဤပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်မျိုးဗီဇကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နှစ်ခုစလုံးအပြုအမူတွေကို (လိင်) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး mesolimbic နှင့် nigrostriatal dopamine လမ်းကြောင်းအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် substantia nigraventral tegmental ဧရိယာနှစ်နိုင်ငံထဲထညျ့ bipolar လျှပ်, stereotaxically နာတာရှည် Self-လှုံ့ဆော်ဖို့ဆုလာဘ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလားတူတွေ့ကြုံများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆွဒီအမျိုးအစားကတော့ hippocampus ၏ CA3 ဒေသနှင့်ကြွက်များအတွင်းမော်တာ cortex ၏မော်လီကျူးအလွှာတွင် synapses များ၏အရေအတွက်သိသိသာသာတိုးသွေးဆောင်တွေ့ရှိထားသည်။ အနှစ်သာရများတွင်နာတာရှည်ဦးနှောက်ဆွသစ်ကို Synaptic ဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများသောရေရှည်အလားအလာ (LTP), သွေးဆောင် ။ နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းဖို့တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့ ventral tegmental ဧရိယာ၌စဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲများကို (VTA) အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှု-မှီခို LTP ဆင်တူကြောင်း glutamatergic synapses ဖြစ်ပေါ်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုကင်း-သွေးဆောင် LTP N-methyl-D-aspartate ၏ dopamine D5 အဲဒီ receptor activation (NMDA) receptors မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာသည်နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်လိုအပ်မှ တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝုဏ်ထောက်ပံ့မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဘုံ neurochemical အလွှာရှိစေခြင်းငှါဤအရပ်၌အဆိုပြုခဲ့သည်။
ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနလိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်နှင့် antisocial အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ။ ဒီအသင်းအဖွဲ့ရှင်းပြဖို့အများစုမှာကြိုးစားမှုတခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ယူကြပြီ။ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေ, တူညီတဲ့စရိုက်လက္ခဏာဥပမာ, လိင်မိတ်ဖက်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက် related ဖြစ်ကြောင်း Impulse, shortsightedness နှင့်ကျူးကျော်သည်လည်းရာဇဝတ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှဆက်စပ်နေပါတယ်။ သို့သော်လိင်မိတ်ဖက်များနှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူတွေအကြားပူးတွဲအပြောင်းအလဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်မိတ်ဖက်နံပါတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဗီဇလည်း antisocial အမူအကျင့်နှင့်ဆက်စပ်သောရှိရာဘုံမျိုးရိုးဗီဇလမ်းကြောင်းကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းရှိသေး၏။ အထက်ပါ-ဖော်ပြထားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, Beaver အဘိဓါန် et al အသုံးပြုခြင်း။ အဆိုပါ dopamine Transporter ဗီဇ (DAT1) ၏လိင်မိတ်ဖက်များနှင့် antisocial အပြုအမူနှင့် polymorphic အကြားခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့အထီးအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ရာဇဝတ်သားငျြ့နှစ်ဦးစလုံးအရေအတွက်အပြောင်းအလဲကရှင်းပြသည်တွေ့ရှိခဲ့ ။ အဆိုပါ polymorphic ယင်း DAT ဌဗီဇ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏နံပါတ်တစ်အသင်းအဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အချို့ polymorphic နှင့်အထီးအချိန်မတန်မီ penile သုတ်ရည်လွှတ်အကြားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 1OR / 1OR genotype ၏ carriers အဆိုပါပေါင်းစပ် 9R9R / 9R10R (9R ပိုမိုမြင့်မားလှုပ်ရှားမှုအောက်ပိုင်း dopamine ရရှိနိုင်မှု) လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါညွှန်ကိန်းများတစ်ခုချင်းစီအပေါ် ejaculate တစ်ဦးအနိမ့်ခုံကိုညွှန်းရမှတ်ခဲ့ ။ အဆိုပါ DATl ဗီဇ, အထူး 10R / 10R genotype ၏ polymorphic, Anti-လူမှုရေးအပြုအမူအပါအဝင်ရောဂါဗေဒပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေများအတွက်ဘရောင်းကျောင်း (စန်းမားကို့စတက္ကဆက်ပြည်နယ်) ကိုတကျရောကျလူငယ်ဆိုးသွမ်းအတွက်ရှာတွေ့ထားပြီ ။ DRD2 နှင့် DATl polymorphic နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးအပြုသဘောဆက်စပ်တဲ့မျက်စိကွယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ရောဂါဗေဒအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင်ကလေးစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝ-သင်တန်း-persistent လူငယ်၏သက်တူရွယ်တူအတုကနေရရှိလာတဲ့အဖြစ် conceptualized သော်လည်းထို့အပြင်, ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေး-ကန့်သတ်ထား antisocial အပြုအမူကိုလည်းဗီဇသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရစေခြင်းငှါအမွှာလေ့လာမှုများကနေ mounting သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ Burt နှင့် Mikolajewski အဆိုပါ DATl ဗီဇနှင့်အတူဤအတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာ 452-HT5A အဲဒီ receptor ကုဒ်သွင်းသည့်မျိုးဗီဇ၏ His2Tyr မူကွဲများပါဝင်သည်ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့မသာ မကြာသေးမီက Jozkow et al ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအထီး၏ရောဂါလက္ခဏာများ (AMS) ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့် 5-HTRlB G861C ၏မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ။ ထိုမှတပါး, အရောင်း, et al ။ Non-ပြောင်းလဲမှုအဆင့်အတန်းနှင့်အတူသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးအကြိမ်ရေရမှတ်များနှင့်အတူရှိ၏မထွက်ရအလွဲသုံးစားမှုနှင့် 5-HTTLPR အုပ်စုတစ်စုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်, multivariable Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့်တွေ့ရှိရ  အလွဲသုံးစားမှုတစ်သမိုင်းသိသိသာသာ s ကို allele နှင့်အတူသာသူတို့အဘို့ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို Post-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက် Non-ပြောင်းလဲမှုပိုမိုအလေးသာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်တော်မူပြီးမှ။
ဒါဟာ vasopressin la receptor မျိုးရိုးဗီဇ (Avpr la) ၏ noncoding ဒေသများတွင် polymorphic လူသားချင်ပန်ဇီမျောက်နှင့် voles အတွက်လူမှုစိတ်ခံစားမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်သိရသည်, မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ site တစ်ခု-တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ Barrett အဆိုအရ, et al ။ , အလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole စျမယား၏ neurobiology လေ့လာဖို့တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း ။ တကယ်တော့, (VlaR) la အဲဒီ receptor vasopressin အချက်ပြယောက်ျားအတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးအဘို့လိုအပ်ပေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, လူမှုရေးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတူတူ genus ၏ asocial voles လုပ်ပေးထက်အကျိုးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ ventral pallidum အတွက် binding သာ. ကြီးမြတ် VlaR ပြ။ Barrett, et al ။ pallidal VlaR သိပ်သည်းဆများချ-စည်းမျဉ်းတစ် mated အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များနှင့်လူကြီးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်လျှော့ချရေးအတှကျဦးစားပေးများတွင်သိသိသာသာချို့ယွင်းမှုတွေ့ရှိခဲ့ ။ Garcia က et al အခြားအလုပ်။ DRD7 ၏အနည်းဆုံး ၇ ကြိမ်ထပ်မံပါသော allele (7R +) ရှိသည့်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်“ တစ်ညရပ်တည်မှု” ရှိခဲ့ဖူးပြီးလိင်မှုပြုခြင်းဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားနှုန်းကိုအစီရင်ခံပြီး၊ လိင်ဖောက်ပြန်မှု .
အရေးကြီးတာက, ဒေါ်နှင့် Guo အဆိုပါ genotype DRD2 * အယ်လ် / A2, DRD2 * A2 / A2, DATl * 9R / 10R နှင့် MAOA * 2R / တင်ဆောင်လာသောတစ်ဦးချင်းစီသည်ဤ loci မှာအခြားအ genotype ထက်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏မြင့်မားသောအလေးသာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ။ DRD2 အသင်းအဖွဲ့များသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်ပြီးအခြားဆက်စပ်မှုများမှာအမျိုးသမီးများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Emanuele, et al ။ DRD2 TaqI A genotype နှင့်“ Eros · (မိတ်ဖက်အပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဖြစ်ပေါ်လာရန်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ဖော်ပြသောချစ်ခြင်းမေတ္တာစတိုင်)” နှင့်“ C516T 5HT2A ပိုလီမာပိုလီမာ” နှင့်အကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ Self- အနိုင်ယူစိတ်ခံစားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မှီခိုရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှု, .
စာပေ၏သုံးသပ်ချက်ကိုမကြာသေးမီကဆောင်းပါးအတော်များများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Matsuda ကတော့ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုဟာအီစရိုဂျင် receptor ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး (ERalpha) နှင့် sociosexual အပြုအမူအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြန်လည်သုံးသပ် ။ တကယ်တော့ epigenetic ယန္တရားများကကမကထပြုသော ER alpha gene Activity ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ histone ပြုပြင်ခြင်းနှင့် DNA methylation တို့ကလူတစ် ဦး ၏လိင်အပြုအမူများကိုပြောင်းလဲစေသည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, Rice, et al ။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သောပုံစံတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည် ။ သူတို့ကဒီမော်ဒယ်လ်သန္ဓေသားပင်မဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ XX vs. XY karyotype တုံ့ပြန်ချဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအမှတ်အသားများအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းရှင်းပြပါ။ ထို့ကြောင့်ဤအမှတ်အသားများ XY fetuses အတွက် testosterone ဟော်မုန်းမှ sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် XX fetuses အတွက်ကိုလျှော့ချ, အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ canalizing ။ ဤ converting ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအမှတ်အသားများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် quantitative Trans-ဗီဇကျော်သယ်ဆောင်စေခြင်းငှါ, ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်အမျိုးအနွယ်-The လိင်တူဆက်ဆံ phenotype အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် Mosaic ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) ခုနှစ်, မိတ်လိုက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်အစပျိုးခြင်းနှင့် oxytocin, vasopressin နှင့် dopamine အပါအဝင် neurotransmitters အမျိုးမျိုးဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အမြဲတည်သောဖြစ်ပေါ်သည်။ Gundersen အားဖြင့်အလုပ် et al နှင့်ဝမ်။  histone deacetylase လူသားဆက်စပ်မှုရှိစေခြင်းငှါအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အထူးသဝမ်, et al ။ ကြောင်း histonedeacetylase-inhibitors-ဆိုဒီယမ် butyrate တွေ့ရှိခဲ့နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်ဦး (ည TSA) တိုးမြှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း trichostatin ။ ဤသည်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်မြောက်ရေးမှာ histone acetylation တစ်ခုတိုးမှတဆင့်, အ NAc အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor (OTR ကို, oxtr) နှင့် vasopressin V ကို la အဲဒီ receptor (VlaR, avprla) ၏တစ်ဦး upregulation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးတက်ကြွစွာမျိုးရိုးဗီဇသဟဇာတမရှောင်ရှားရန်ဖြစ်စေ polyandry အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇထက်သာလွန်ယောက်ျား၏မျက်နှာသာအတွက်ဘက်လိုက်မှုဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြကြောင်းအကျိုးစီးပွားကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ သာလွန်အထီးကြံ့ခိုင်ရေး၏ရွေးချယ်ရေးကြောင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုဆိုးကျိုးများဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ Zeh နှင့် Zeh အဆိုအရ, DNA ကို sequence ကို-based အပြောင်းအလဲနှင့်မတူဘဲဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် stochastic သက်ရောက်မှုကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်တစ်ဦးချင်း၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းတွေ့ကြုံ ။ သူတို့ဟာဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲဟာ Post-copulatory လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်ကြံ့ခိုင်ရေးမှသုက်ပိုးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုချိတ်ဆက်တွေ့ရှိချက်အဘို့အကောင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မျိုးဗီဇနှင့် meme ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: လူ့ပှား
Eysenck သည်အပိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်အပြုအမူများနှင့် neuroticism နှင့်လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာပြinနာများ (လူမှုဆန့်ကျင်ရေးအပြုအမူ) တို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုအဆိုပြုထားသည်။ အိမ်ထောင်သည်များနှင့်အစောပိုင်းလေ့လာမှုကဤဆက်စပ်မှုများမပြခဲ့ပါ။ ဒါဟာဆက်သွယ်မှု၏အရည်အသွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆုံးဖြတ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်သွယ်မှုကိုရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမဟုတ်လက်မထပ်ရသေးပုဂ္ဂိုလ်များသာတည်ရှိသည်ယူဆတယ်ခဲ့သည် ငယ်ရွယ်သောလက်မထပ်ရသေးသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ထိုသူသည်အစောပိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပိုမိုမြင့်မားစွာဖော်ပြသည့်အရာနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဆက်စပ်မှုရှိသည်။ neuroticism နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုရေးသဘောထားများအကြားဆက်စပ်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ် ဦး သရုပ်ဆောင်ထွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစကေးနှင့်ဆက်စပ်မှု၏, တွေ့ရှိချက်လူမှုရေး - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာယောက်ျားလေးဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အစပြုလုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် ။ ဤရှုထောင့်သည်စိတ်ထဲရှိတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောမျိုးဗီဇများနှင့်ပတ်သက်သော Richard Brodie ၏အကြံဥာဏ်နှင့်တိုက်ရိုက်ကိုက်ညီမှုရှိသည် ။ DNA ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်မနုropဗေဒပညာရှင်တို့က“ ကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်၊ ထွက်သွားခြင်းနှင့်များပြားလာရန်။ " ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှုသည်နှေးကွေးသော်လည်းနှစ် ၂၀ အတွင်းတစ်လှည့်စီသည်“ meme ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ ဝါကျကိုဖတ်ရန်အချိန်တွင်စိတ်ကူးတစ်ခုပြောင်းသွားသည်။ ” ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ငယ်သောကလေးငယ်များရှိသည့်စမတ်ကလူများနှင့်ဆက်စပ်မှုမှအပမျိုးရိုးဗီဇဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ တကယ်တော့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုအသုံးပြုလိုစိတ်ရှိစေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေရှိရင်လူမျိုးဆက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလူတွေကိုကလေးရဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သေဆုံးသွားမှာပါ။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာလေ့လာမှုများအရလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၂၀၀၀ တွင် Homo sapiens သည် IQs ကိုလျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့်ရွေးချယ်သောမိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် .
အလွန့်အလွန်တစ်ခုကို extraversion အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကတည်းကအရေအတွက် geneticist 40-60% ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖို့ extraverted ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ heritability ခန့်မှန်းကြောင်းအထဲကပြန်သွားလေ၏။ Smillie နှင့်အပေါင်းအသင်းကိုလေ့လာခြင်းနှင့် DRD2 ဗီဇအယ်လ် allele တစ်ဦးမိတ္တူသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား extraversion နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ။ ဤအသင်းအဖွဲ့သည်လူ့မျိုးပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်စေသည်။ လေ့လာမှုဆိုင်ရာပြသနာများနှင့်အခြားထကြွလွယ်သော၊ compulsive၊ ရန်လိုမှုနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့် DRD2 Al ၏သယ်ဆောင်သူများသည် DRD2Al allele ၏ကြိမ်နှုန်းတွင်တိုးတက်သောနှင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် မျိုးစိတ်များ၏မျိုးရိုးဗီဇအရည်ပျော်ကျခြင်း " .
သူ့စာအုပ်မှာတော့လာစွဲလမ်း-နှောင့်အယှက်အပြုအမူနှင့်အတူလူများ DRD2 အယ်လ် allele တူသောစွဲမျိုးဗီဇ၏ရွေးချယ်ရေးအစောပိုင်းကကလေးများရှိသည်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး ။ သူကဒီအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ် allele ကိုသယ်ဆောင်တဲ့သူတွေမှာအသက် ၂၀ ရောက်ရင်ကလေးတွေကိုပြောခွင့်ရမယ်။ ရလဒ်အနေနှင့် mutant gene သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမျိုးပွားနိုင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနှစ် ၂၀ တိုင်းတွင်မျိုးရိုးဗီဇ၏ပုံမှန်ပုံစံသည် ၂၅ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်မျိုးပွားလိမ့်မည်။ 20/25 အချိုးသည် 20 ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁.၂၅ ဆရွေးချယ်သောအားသာချက်ရှိသည့်မျိုးရိုးဗီဇမျိုးဆက်မှမျိုးဆက်တစ်ခုအထိအကြိမ်ရေတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်များ၏သား ဦး ဆုံးကလေးမွေးသည့်အချိန်နှင့်ငါးနှစ်ကွာခြားချက်သည်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှ စတင်၍ အုပ်စုမွေးသောအုပ်စုမှသယ်ဆောင်သောမျိုးရိုးဗီဇကိုသိသိသာသာအလျင်အမြန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စေရန်လုံလောက်သည်။ အချို့သော RDS အပြုအမူများတိုးပွားလာမှုကို ၁၉၅၅ မှယခုအချိန်အထိမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားတိုးဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူ syndrome ရောဂါ (မူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်, ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်နှင့် delinquent အပြုအမူ, ဆေးလိပ်သောက်), အမူအကျင့်ရောဂါ, ရာဇဝတ်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, အရက်သေစာ, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လက်မထပ်မိခင်များ, သက်သာချောင်ချိရေး, ကျောင်းထုတ်ပယ်နှင့်ကျောင်းမှကျောင်းထွက်ပါဝင်သည် အိုင်ကျူတစ်ပြိုင်နက်ကျဆင်းခြင်း ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များဘာကလေလေ့လာမှုကလေးကျန်းမာရေးနှင့် Developmental လေ့လာရေးနှင့်လူငယ်သို့မဟုတ် NLYS အမျိုးသား longitudinal စစ်တမ်းများကနေ longitudinal data တွေကိုအသုံးချဖို့အပေါ်အခြေခံထားတယ် ။ ဤအချက်အလက်အသုံးချဖို့, လာ ​​1955 ထံမှ 2015 ထိုကွောငျ့ ပတျသကျ. လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပါအဝင် RDS အပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှု, တိုးမြှင့်, ဥပမာအားဖြင့် DRD2 အယ်လ် allele ၏ကြိမ်နှုန်း၏နှစ်ဆရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်း ။ ကျနော်တို့ကဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ခန့်မှန်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲတိုက်တွန်းပါသည်။
အချို့သဘောမတူသော်လည်း, ငါတို့ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပီဂနြနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ထိခိုက်ခံရင်း၏လက်တွေ့စကားရပ်နှင့်အတူ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့အတူ RDS ခွဲဝေမှုဝိသေသလက္ခဏာများတစ်မျိုးကွဲအဖြစ် hypersexuality ရောဂါအဆိုပြုထားပါသည်။ ဤအချိန်တွင် untested ပေမယ့်, ငါတို့သည်လည်းရေတိုရေရှည် FDA ကထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ဆေး-ကူညီကုသ (MAT) ရေရှည် dopamine homeostasis မှဦးဆောင် dopaminergic လမ်းကြောင်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် dopamine function ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမျက်နှာသာတင်ပြသည်။ အဆုံးစွန်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီဖို့စေခြင်းငှါအချို့ပုံစံများအားဖြင့်စုံနိုင်ဘူး။
အလားအလာဘက်လိုက်မှုဆိုသော်ငြား, သူတို့က dopamine agonist ကုထုံး-nutraceuticals (KB220), အ 12 အဆင့်အစီအစဉ်နှင့်အစဉ်အလာ, ဘက်စုံကုသမှုသိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT) နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာကယ်ဆယ်ရေးကုထုံး (TRT) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် dopamine-တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစားအစာများ (ပုံပါဝင်သည် 1) .
ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာ hypersexuality ရောဂါ DSM ၏အနာဂတ် edition မှာတွင်ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းယုံကြည်နေချိန်မှာကျနော်တို့ဒါနည်းနည်းဒီ neurogenetics နှင့်ပီဂနြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရောဂါနှင့်ပင်ဆုတ်ခွာ symptomatology နှင့်ယေဘုယျ phenomenology အကြောင်းကိုလူသိများကြောင်းအတန်ငယ်စိတ်မပျက်များမှာ ။ အဆိုပါချုပ်ယူ-အိမ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုကျွန်တော်တို့အခုအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော oxytocin-vasopressin-orexin-dopamine အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားဆုလာဘ်မျိုးဗီဇအဖြစ်ဗီဇမှတိကျတဲ့ပီဂနြအပါအဝင် neuroimaging နှင့် neurogenetics ၏ဘုံ၌စမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေဖို့သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းကအားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်ကဒီအခွအေနေ dopamine homeostasis မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကူညီပေးဖို့ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic ပစ်မှတ်ထားကြောင်းကုသမှုမှအကျိုးစေခြင်းငှါ [84-89]။ et al Joranby ကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏တစ်ဦးကနံပါတ်။ နှင့် Edge နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက် shared neurochemical ယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်သောရွှေထောက်ခံမှုဘုံကုသမှုအခွင့်အလမ်းများကိုအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော RDS အယူအဆအတွက်သိမ်း ယူ. မကြိုက်အဖြစ် [90-91].
သမိုင်းကြောင်းအရလိင်စွဲလမ်းမှုအား DSM-III တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်း DSM-1V မှဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်လယ်ကွင်းမှခေါင်းဆောင်များအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်ပြီးနောက် Kafka, Reid, Prause နှင့်အခြားသူများအပါအ ၀ င်သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများသည် "Hypersexuality" ကိုလိင်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲသီးခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သော“ hypersexuality” သည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပါအ ၀ င်အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်ဆင်တူသည်ဟုဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဒေသရှိမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ်များသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည် လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမဟုတ်ဘဲလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပေးသည့် Prause အဖွဲ့မှ electrophysiological-based လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။ ။ ဤရွေ့ကားစုံစမ်းစစ်ဆေးလည်း VSS တုံ့ပြန်အောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ (LPP) ပြသခဲ့သည်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပေးပို့သူကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) ၏မိမိတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကိုသတင်းပို့ subjects အခြားအလုပ်အတွက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီပုံစံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမော်ဒယ်များမှသည်ကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်ကြောင်းအဆိုပြု ။ သို့သော် hypersexual ရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်သောမဟုတ်နေစဉ်, Voon ရဲ့အဖွဲ့ကအလုပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများထိတွေ့ compulsive-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူဘာသာရပ်များအတွက်ကြောင့်မူးယစ် cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်ကြီးမြတ်သောလှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည် ။ သာ. ကွီးမွတျအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောထက်အကြိုက်နောက်ထပ်ဒီအာရုံကြောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီများနှင့်အတူအံ .
လက်ရှိဆောင်းပါး၏စာရေးသူများကကျွန်ုပ်တို့သည် Hypersexuality Disorder ၏ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်၎င်းတို့၏ DSM-5 တွင်ဤရောဂါပါ ၀ င်ရန်ရိုးသားသောရည်ရွယ်ချက်အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အရေးကြီးသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအားစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းဝန်ခံသည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ် - စစ်ဆေးမှုဟုမဆိုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် DSM ၏အနာဂတ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ မှတ်သားစရာမှာလက်ရှိ NIH ဒါရိုက်တာစတီဗင်ဟိုင်မန်က“ DSM သည်လက်တွေ့နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျသောထင်ဟပ်ပြသမှုမဟုတ်၊ သုတေသီများသည်စိတ်ရောဂါလေ့လာရန်နှင့်နားလည်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့်ရောဂါရှာဖွေခွဲခြားရန်အခြေခံကျကျချဉ်းကပ်မှုအသစ်လိုအပ်သည်။ ။ ထိုမှတပါး, Casey, et al ။ အဆိုပါ DSM ကွဲပြားအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါစဉ်းစားနေချိန်မှာကြောင်းအဆိုပြုထား "မမှန်အကြားနယ်နိမိတ်မကြာခဏ DSM အကြံပြုသကဲ့သို့တင်းကြပ်မဟုတ်" .
2014, Karila ခုနှစ်, et al ။ ထို့အပြင် hypersexual ရောဂါအဖြစ်လူသိများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လေးနက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြေအနေကြားမှအခြို့သောစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များကလျစ်လျူရှုထားပြီးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤစာရေးဆရာများအဆိုအရသူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါတူညီတဲ့ပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းတင်ပြသည်။ သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ-related မမှန်၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 3% ကနေ 6% အထိကြောင်းထောက်ပြနေသည်။ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ဘာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဖှလူကြီးများ, တယ်လီဖုန်းလိင်, ချွတ်ကလပ်စစ်ကြောနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်အတူထစ်အငေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အပါအဝင်ထို့ကြောင့်လိင်စွဲလမ်း / Hypersexual Disorder display တွေ၏ဆောက်လုပ်ရေးပြဿနာအပြုအမူတွေ ။ အကယ်စင်စစ်ကျနော်တို့ et al Carvalho ကမှတ်ချက်ချအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် hypersexuality အကြားကွဲပြားခြားနားချက်များရှိစေခြင်းငှါသဘောတူသည်။ , Rettenberger, et al ။ , Kor, et al ။ , ရိဒ်, et al ။ , Kafka နှင့် Hennen နှင့် Prause, et al ။ [93-94] အခြားသူတွေအကြား။
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ hypersexuality နှင့်လိင်စွဲအကြားအချို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်နေစဉ်, ပိုမိုသုတေသနပြုသင့်လျော်စွာ, ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခြေအနေများခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်, ထိုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ et al Walters ၏အလုပ်နှင့်အတူသဘောတူကြဘူး။  ကြောင်း hypersexuality အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုသဘောသဘာဝအတွက်အရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ သူတို့က hypersexuality ဟာစဉ်ဆက် (ပုံ၏အထက်အဆုံးမှာကျသွားတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တွင်ဖွဲ့စည်းကိုလည်းအကြံပြု 1).
ပုံ 1: RDS တစ်မျိုးကွဲအဖြစ် Hypersexuality Disorder တစ်ဖော်ပြရန်မြေပုံ
အဆိုပါပုံအပြန်အလှန် neurogenetic နှင့် epigenetic အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြသည်။ ရေတို dopamine ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်နှစ်ရှည်“ dopaminergic-homeostasis” အခြေပြုကုသမှုများနှင့် dopamine တိုးမြှင့်ကုထုံးများနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြထားသည်။ စက်ဝိုင်းများက RDS ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသည်။
Full-size ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုအသိအမှတ်ပြုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexuality ရောဂါနှင့်လိင်စွဲမှုတို့အကြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တူညီမှုများကို neuroimaging (fMRI, PET, SPECT)၊ optogenetics၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် epigenetic နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ လုံလောက်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်အနာဂတ် DSM ၏ထုတ်ဝေမှုများတွင် hypersexuality ကိုရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်အခြေခံဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
Kor တစ်ဦးက, Fogel က Y, ရိဒ် RC, Potenza MN: Hypersexual Disorder တစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံရသငျ့သလော။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2013, 20:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3836191/. 10.1080 / 10720162.2013.768132
စွန်ပလွံ B က: စိတျ၏ရောဂါအပေါ်သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။ စွန်ပလွံ B က (ed): Gryphon Editions, Ltd. , ဘာမင်ဂမ်, AL; (1812 ထုတ်ဝေမူရင်းအလုပ်) 1979 အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။
ဗွန် Krafft-Ebing R ကို: Psychopathia Sexualis။ Klaf FS (ed): Stein နှင့်နေ့, နယူးယောက်, (1886 ထုတ်ဝေမူရင်းအလုပ်) 1965 အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။
Hirshfeld M က: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ခြင်း၏ဇစ်မြစ်, သဘောသဘာဝနှင့်ကုသမှု။ Hirshfeld M (ed): အီမာဆန်စာအုပ်များ, နယူးယောက်, 1948 ။
တွန်းလှည်း RJ: ကောက်သော: မုန်းတီးမှုများ၏ခေါ်ဆောင်သွားပုံစံ။ Pantheon စာအုပ်များ, နယူးယောက်, 1975 ။
Allen က, CA: psychosexual မမှန်၏တစ်ဦးကဖတ်စာအုပ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, လန်ဒန်, 1962 ။
အဲလစ်တစ်ဦးက, Sagarin အီး: Nymphomania: အ oversexed အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Gilbert ကစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, 1964 ။
Kafka အမတ်: hypersexual ရောဂါမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014, 43: 1259-1261 ။ 10.1007 / s10508-014-0326-y က
ရိဒ် RC, Temko J ကို, Moghaddam JF, Fong သည် TW: hypersexual ရောဂါအတှကျအအကဲဖြတ်ယောက်ျားအတွက်အရှက်ကွဲခြင်း, မွေးမြူရေးနှင့် Self-သနားခြင်းကရုဏာစိတ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Pract ။ 2014, 20: 260-268 ။ 10.1097 / 01.pra.0000452562.98286.c5
Bancroft J ကို: လူ့လိင်နှင့်၎င်း၏ပြဿနာများ။ တတိယစာစောင်။ Elsevier, အောက်စ်ဖို့, အင်္ဂလန်, 2009 ။
ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ, 10th တည်းဖြတ်မူ ။ (2007) ။ ဝင်ရောက်: ဇူလိုင်လ 23, 2015: http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2007/.
အဆိုတော် B, Toates FM ရေ: လိင်လှုံ့ဆျောမှု။ J ကိုလိင်သုတေသန။ 1987, 23: 481-501 ။ 10.1080 / 00224498709551386
Kafka အမတ် Hennen J: ယောက်ျားအတွက် Hypersexual အလိုဆန္ဒ: paraphilia-related မမှန်နှင့်အတူယောက်ျားထံမှကွဲပြားခြားနားသော paraphilias နှင့်အတူယောက်ျားရှိပါသလဲ။ လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2003, 15: 307-321 ။ 10.1023 / A: 1025000227956
Buss DM, Schmitt DP: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာသီအိုရီ: လူ့မိတ်လိုက်တခုတခုအပေါ်မှာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်။ Psychol ဗျာ 1993, 100: 204-232 ။ 10.1037 / 0033-295X.100.2.204
Corbett-Detig RB, Hartl DL, Sackton တီဘီ: သဘာဝရွေးချယ်ရေးမျိုးစိတ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အနှံ့ကြားနေမတူကွဲပြားမှုဖိအား။ Psychol Bull ။ 1995, 13: e1002112.- 469-496 ။ Doi: 10.1371 / journal.pbio.1002112
Laumann EO, Michael RT, Gagnon JH: အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားလိင်စစ်တမ်းတစ်ခုကနိုင်ငံရေးသမိုင်း။ Fam Plann ရှုထောင့်။ 1994, 26: 34-38 ။ 10.2307 / 2136095
ဂျုံးစ်ဂျီစီ၊ Barlow DH: လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, စိတ်ကူးယဉ်နှင့် masturbatory စိတ်ကူးယဉ်၏ self-အစီရင်ခံအကြိမ်ရေ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1990, 19: 269-79 ။ 10.1007 / BF01541552
Oliver MB, Hyde JS: လိင်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် Meta-analysis သည်။ Psychol Bull ။ 1993, 114: 29-51 ။ 10.1037 / 0033-2909.114.1.29
Okami P, Shackelford TK: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူများတွင်လူ့လိင်ကွဲပြားမှု။ Annu ဗြာလိင် Res ။ 2001, 12: 186-241 ။ 10.1080 / 10532528.2001.10559798
Leitenberg H ကို, Detzer MJ, Srebnik: D: ကျားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုဖို့ preadolescence အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွေ့အကြုံစပ်လျဉ်းနှင့် / သို့မဟုတ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1993, 22: 87-98 ။ 10.1007 / BF01542359
Fetterman AK, Kruger NN, ရော်ဘင်ဆင် MD: လိင်ချိတ်ဆက်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာလိင်အင်္ဂါ salience တစ်ခြယ်လှယ်တွေနဲ့ကွဲပြား။ လှုံ့ဆော် Emotion ။ 2015, 39: 99-103 ။ 10.1007/s11031-014-9420-7
Basson R: အမျိုးသမီးများပြproblemနာနည်းသောလိင်အလိုဆန္ဒကိုဖြေရှင်းရန်အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားသောပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်း။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2001, 27: 395-403 ။ 10.1080 / 713846827
Andersen က BL, Cyranowski JM, Aarestad S က: အမျိုးသမီးလိင် conceptualize မှအတု, လိင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဘာသာဂုဏ်ထူးကျော်လွန်: Baumeister အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်။ Psychol Bull ။ 2000, 126: 380-389 ။ 10.1037 // 0033-2909.126.3.380
Knight ဟာ RA, Sims-Knight ဟာ je: အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူအခြားရွေးချယ်စရာယူဆချက်စမ်းသပ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003, 989: 72-85 ။ 10.1111 / j.1749-6632.2003.tb07294.x
Blum K ကို Werner T က, Carnes S က, Carnes P ကို, Bowirrat တစ်ဦးက, Giordano J ကို, အော်စကာ Berman က M, ရွှေ M က: လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် 'n' လိပ် - ဘုံ mesolimbic activation အားဆုချသောဗီဇ polymorphisms ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆခြင်း။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2012, 44: 38-55 ။ 10.1080 / 02791072.2012.662112
Carnes PJ၊ အစိမ်းရောင် BA၊ Merlo LJ၊ Polles A၊ Carnes S၊ Gold MS PATHOS - လိင်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အတိုချုပ်စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်လွှာ။ J ကိုစွဲ Med ။ 2012, 6: 29-34 ။ 10.1097/ADM.0b013e3182251a28
Hanson RK: Static-99 အဟောင်းတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြား recidivism ကြိုတင်ခန့်မှန်းသလား။ လိင်အလွဲသုံးစားမှု။ 2006, 18: 343-355 ။ 10.1007 / s11194-006-9027-y က
Weinstein တစ်ဦးက, Katz က L, Eberhardt H ကို, Cohen ကိုငွေကျပ်, Lejoyeux M က: လိင်မလှူ - လိင်, ပူးတွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2015, 4: 22-26 ။ 10.1556 / JBA.4.2015.1.6
Chung WS, Lim က SM, Yoo JH, Yoon H ကို: အသံ-အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့ဦးနှောက်ကို Activation အတွက်ကျားခြားနားချက်; အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတူညီသောဗီဒီယိုကလစ်တုံ့ပြန် arousal ၏တူညီသောအဆင့်အထိကိုတွေ့ကြုံခံစားကြသနည်း။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2013, 25: 138-142 ။ 10.1038 / ijir.2012.47
Rupp HA, ဝေါ်လဲန် K သည်: အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2008, 37: 206-218 ။ 10.1007/s10508-007-9217-9
Hanson RK, Harris က AJ, Helmus L ကို, Thornton: D: high-အန္တရာယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်အစဉ်အမြဲမြင့်မားသောအန္တရာယ်မဖြစ်စေခြင်းငှါ။ J ကို interp အကြမ်းဖက်မှု။ 2014, 29: 2792-813 ။ 10.1177 / 0886260514526062
ရိဒ် RC, Cyders MA, Moghaddam JF Fong သည် TW: လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်, hypersexuality နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် Barratt Impulse စကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2014, 39: 1640-1645 ။ 10.1016 / j.addbeh.2013.11.008
ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, Gilliland R ကို, Cooper က eb, McKittrick H ကို, Davtian M က, Fong သည် T-: hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2012, 9: 2868-2877 ။ 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x
Garcia FD, Thibaut F: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2010, 36: 254-260 ။ 10.3109 / 00952990.2010.503823
ရိဒ် RC, Bramen je, Anderson ကတစ်ဦး, Cohen ကိုက MS: hypersexual လူနာအကြားသတိ, စိတ်ခံစားမှု dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကျရောက်နေတဲ့။ J ကို Clin Psychol ။ 2014, 70: 313-321 ။ 10.1002 / jclp.22027
ကိုင်ဆောင်သူ MK, Hadjimarkou MM, ဇွပ် SL, Blutstein T က, Benham RS, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM, မိုင်းဂျေ: စိတ်ကြွဆေးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် medial amygdala နှင့် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံ activation ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2010, 35: 197-208 ။ 10.1016 / j.psyneuen.2009.06.005
Spauwen LW, Niekamp လေး၊ Hoebe CJ, Dukers-Muijrers NH: swingers အကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု: အဆိုပါနယ်သာလန်အတွက် cross-section လေ့လာမှု။ လိင် Transm Infect ။ 2015, 91: 31-36 ။ 10.1136 / sextrans-2014-051626
Castelo-ဘရန်ကိုကို C, Parera N ကို, Mendoza N ကို, Perez-Campos အီး, Lete ငါ CEA အုပ်စုတစ်စု: အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ။ Gynecol Endocrinol ။ 2014, 30: 581-586 ။ 10.3109 / 09513590.2014.910190
Jia ZJ, ယန် SY, Bao YP, လျန် Z ကို, Zhang က HR, လျူ ZM: စိတ်ကြွဆေး-type အမျိုးအစားစိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများနှင့်ဘိန်းဖြူအသုံးပြုသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကိုစွဲ Med ။ 2013, 7: 422-427 ။ 10.1097/ADM.0b013e3182a952b2
Bruijnzeel AW: Kappa-Opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2009, 62: 127-146 ။ 10.1016 / j.brainresrev.2009.09.008
Orsini, CA, Ginton, G, Shimp ကီလိုဂရမ်, Avena မိုင်, ရွှေက MS, Setlow B က: နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးရပ်နားခြင်းပြီးနောက်အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့်အလေးချိန်အမြတ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2014, 78: 76-80 ။ 10.1016 / j.appet.2014.03.013
အီဘရာဟင်စီ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် neurocognitive မမှန်အတွက် Hypersexuality - စာပေနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု၏ပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်။ စိတ်ရောဂါညု။ 2014, 26: 36-40 ။
Vallejo-မက်ဒီနာ P ကို, Sierra JC: စပိန်အထီးမူးယစ်ဆေး-မှီခိုနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် abstinence ၏မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ် multisite လေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2013, 10: 333-341 ။ 10.1111 / j.1743-6109.2012.02977.x
Baskerville က TA, ဒေါက်ဂလပ် AJ: အပြုအမူတွေကိုအခြေခံ Dopamine နှင့် oxytocin interaction က: အမူအကျင့်မမှန်ဖို့အလားအလာပံ့ပိုးမှုများကို။ CNS Neurosci Ther ။ 2010, 16: e92-123 ။ 10.1111 / j.1755-5949.2010.00154.x
Riebe CJ, Lee က TT, ဟေးလ် MN, Gorzalka BBB: မိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် subchronic cannabinoid အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ counters။ neuroscience လက်တ။ 2010, 472: 171-174 ။ 10.1016 / j.neulet.2010.01.079
Korda JB, Pfaus JG, Kellner CH, Goldstein I: persistent လိင်အင်္ဂါ arousal ရောဂါ (PGAD): electroconvulsive ကုထုံးတွေနဲ့ရေရှည်လက်ခဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၏အမှုအစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2009, 6: 2901-2909 ။ 10.1111 / j.1743-6109.2009.01421.x
Huang က CJ, Liao HT, Yeh GC, Hung က KL: Kleine-Levin syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် HLA-DQB1 alleles ၏ဖြန့်ဝေ။ J ကို Clin neuroscience ။ 2012, 19: 628-630 ။ 10.1016 / j.jocn.2011.08.020
Blum K ကို Noble EP, Sheridan PJ, Montgomery တစ်ဦးက, Ritchie T က, Jagadeeswaran P ကို, Nogami H ကို, Briggs AH, Cohn JB: အရက်ထဲမှာလူ့ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ Allelic အသင်းအဖွဲ့။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1990, 263: 2055-2060 ။ 10.1001 / jama.263.15.2055
Blum K ကို Sheridan PJ, Wood က RC, Braverman ER, ချန်တီဂျေ, Cull JG, လာ DE: ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ၏ပစ်မှတ်အဖြစ် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ။ JR Soc Med ။ 1996, 89: 396-400 ။ 10.1177 / 014107689608900711
Miller က WB, ခေါက်ဆွဲ DJ သမား, MacMurray J ကို, chiu ကို C, Wu H ကို, လာ DE: Dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကို Biosoc သိပ္ပံ။ 1999, 31: 43-54 ။ 10.1017 / S0021932099000437
Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန် K သည်: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ် neuroscience ။ 2004, 7: 411-416 ။ 10.1038 / nn1208
Quiñones-Jenab V ကို: သူတို့ကင်းအလွဲသုံးစားသောအခါအဘယျကွောငျ့အဗီးနပ်စ်နှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ကနေယောက်ျားကနေအမျိုးသမီးတွေကိုရှိပါသလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006, 1126: 200-203 ။ 10.1016 / j.brainres.2006.08.109
Noble EP, Blum K ကို Khalsa ME, Ritchie T က, Montgomery, တစ်ဦးက Wood က RC, Fitch RJ, Ozkaragoz T က, Sheridan PJ, Anglin MD, သိပ်မရှိပါဘူးတစ်ဦးက, Treiman LJ, Sparks သည် RS: ကိုကင်းမှီခိုအတူ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ Allelic အသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1993, 33: 271-285 ။ 10.1016/0376-8716(93)90113-5
Harrison PJ, Tunbridge EM: Catechol-O-methyltransferase (COMT): စိတ်ရောဂါမမှန်ဖို့ဓာတ်အတွက်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism မှပံ့ပိုးနေတဲ့မျိုးဗီဇ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008, 33: 3037-3045 ။ 10.1038 / sj.npp.1301543
Guo, G, Tong Y ကို: အမွှာထံမှသက်သေအထောက်အထားနှင့် dopamine D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇ: ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံ, မျိုးဗီဇများနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှာအသက်အရွယ်။ လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှု။ 2006, 43: 747-769 ။ 10.1353 / dem.2006.0029
Bradley KC, Boulware ကို MB, Jiang H ကို, Doerge RW, Meisel RL, Mermelstein PG: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2005, 4: 31-44 ။ 10.1111 / j.1601-183X.2004.00093.x
Rao က BS, Raju TR, Meti BL: hippocampus နှင့် Self-stimulation ကြိုးအတှေ့အကွုံအပြီးမော်တာ cortex ၏မော်လီကျူး layer ရဲ့ CA3 ဒေသတွင်း၌ synapses ၏တိုးမြှင့်ကိန်းဂဏန်းသိပ်သည်းဆ။ neuroscience ။ 1999, 91: 799-803 ။ 10.1016/S0306-4522(99)00083-4
Heshmati M က: အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင် LTP: အသစ်သောယန္တရားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အချိန်သင်တန်းစွဲ၏ဆယ်လူလာအလွှာဟာအလင်း။ J ကို Neurophysiol ။ 2009, 101: 2735-2737 ။ 10.1152 / jn.00127.2009
Beaver အဘိဓါန် KM, Wright JP, Walsh ဖြေ ပြစ်မှုဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်အကြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်တစ်ဦးကမျိုးဗီဇ-based ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှင်းပြချက်။ Biodemography Soc Biol ။ 2008, 54: 47-55 ။ 10.1080 / 19485565.2008.9989131
Santtila P ကို, Jern P ကို, Westberg L ကို, Walum H ကို, Pedersen မှန် CT, Eriksson အီး, Sandnabba N က: အဆိုပါ dopamine Transporter ဗီဇ (DAT1) polymorphic အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကိုလိင် Med ။ 2010, 7: 1538-1546 ။ 10.1111 / j.1743-6109.2009.01696.x
Chen က TJH, Blum K ကို Mathews: D, Fisher က L ကို, Schnautz N ကို, Braverman ဧရ, Schoolfield J ကိုနှိမ့်ချ W က, Blum SH, Mengucci J ကို, Meshkin B, Arcuri V ကို, Bajaj တစ်ဦး, စောင့်ဆိုင်း RL, လာ DE: အဆိုပါ Dopamine D2 receptor (DRD2) [Taq1 A1 Allele] နှင့် Dopamine Transporter (DAT1) [480 BP Allele] ရောဂါဗေဒရန်လိုသည့်အပြုအမူနှင့်အတူဗီဇ, ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဆုကြေး Deficiency Syndrome (RDS) ၏လက်တွေ့မျိုးကွဲနှစ်ခုလုံး၏ပဏာမအသင်းအဖွဲ့။ မျိုးဗီဇ Ther Mol Biol ။ 2007, 1: 93-112 ။ ဝင်ရောက်: ဇူလိုင်လ 23, 2015: http://gtmb.org/pages/Vol11A/HTML/11._Chen_et_al,_93-102.htm.
Burt လုပ် SA, Mikolajewski AJ: သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်း antisocial အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ ကျူးကျော်ပြုမူနေ။ 2008, 34: 437-445 ။ 10.1002 / ab.20251
Jóźków P, Słowińska-Lisowska M, ŁaczmańskiŁ, Mędraś M: neurotransmitter receptor မျိုးဗီဇ၏ Polymorphic မျိုးကွဲအိုမင်းယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ: HALS လေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကို။ Neuroendocrinology ။ 2013, 98: 51-59 ။ 10.1159 / 000350324
အရောင်း JM၊ DiClemente RJ, Brody GH, Philibert RA, Rose E: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အာဖရိက - အမေရိကန်အမျိုးသမီးများကွန်ဒုံးကို HIV-တားဆီးကာကွယ်ရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်အမူအကျင့်ကို 5-HTTLPR ပိုလီမာဖစ်နှင့်အနိုင်အထက်ပြုမှုသမိုင်းအကြားဆက်စပ်မှု။ prev သိပ္ပံ။ 2014, 15: 257-267 ။ 10.1007/s11121-013-0378-6
Barrett CE၊ Keebaugh AC၊ Ahern TH, Bass စီ၊ Terwilliger EF, Young LJ: vasopressin အဲဒီ receptor အတွက်အပြောင်းအလဲ (Avpr1a) စကားရပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်စျမယားနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူမှာမတူကွဲပြားမှုတွေဖန်တီး။ Horm ပြုမူနေ။ 2013, 63: 518-526 ။ 10.1016 / j.yhbeh.2013.01.005
Garcia က JR, MacKillop J ကို, Aller EL, Merriwether လေး, Wilson က DS, Lum JK: ဖောက်ပြန်နဲ့လိနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ dopamine D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010, 5: e14162 ။ 10.1371 / journal.pone.0014162
Daw J, Guo G: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များသည်သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုသည်မရှိသည်အပေါ်မျိုးဗီဇသုံးမျိုး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ အမေရိကန်၊။ လူဦးရေလုံး (Camb) ။ 2011, 65: 253-271 ။ 10.1080 / 00324728.2011.598942
Emanuele အီး, Brondino N ကို, Pesenti S ကိုပြန်က S, Geroldi: D: လူ့မတ်ေတာရှိတဲ့စတိုင်များအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇတင်။ Neuro Endocrinol လက်တ။ 2007, 28: 815-821 ။
Matsuda KI: မျိုးဗီဇကမကထαဟာအီစရိုဂျင် receptor အတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲမှု: sociosexual အပြုအမူတွေအတွက်ဂယက်ရိုက်။ တပ်ဦး neuroscience ။ 2014, 8: 344 ။ 10.3389 / fnins.2014.00344
RR WR၊ Friberg U, Gavrilets S: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း - ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပုံစံအသစ်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်း protocol တစ်ခု။ Bioessays ။ 2013, 35: 764-770 ။ 10.1002 / bies.201300033
Gundersen B က: ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း။ နတ် neuroscience ။ 2013, 16: 779 ။ 10.1038 / nn0713-779
ဝမ် H၊ Duclot က F, Liu Y, Wang Z, Kabbaj M: Histone deacetylase inhibitors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့။ နတ် neuroscience ။ 2013, 16: 919-924 ။ 10.1038 / nn.3420
Zeh ဂျာ, Zeh DW: မိခင်အမွေအနှစ်, epigenetics နှင့် polyandry ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ Genetica ။ 2008, 134: 45-54 ။ 10.1007 / s10709-007-9192-z
Addad M က, Lesiau ဖြေ Extraversion, neuroticism, အကျင့်ပျက်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူ။ Med ဥပဒေ။ 1989, 8: 611-622 ။
Brody R ကို: စိတျ၏ဗိုင်းရပ်စ်: အ meme ၏နယူးသိပ္ပံ။ hay အိမ်, Inc မှ, နယူးယောက်, NY; 1996, စစ 66 ။
Hernnstein R ကို, Murray ကို C: အဆိုပါဘဲလ် Curve: အမေရိကန်ဘဝအတွက်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့အတန်းအစားဖွဲ့စည်းပုံ။ အဆိုပါ Free Press မှ, နယူးယောက်, NY; 1994 ။
Smillie ld, Cooper က AJ, Proitsi P ကို, ဝဲလ် JF, ရွေးသူအေဒီ: DRD2 dopamine မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အပြောင်းအလဲ extraverted ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခန့်မှန်း။ neuroscience လက်တ။ 2010, 468: 234-327 ။ 10.1016 / j.neulet.2009.10.095
လာ DE: အဆိုပါ Gene ဗုံး။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုစှဲနှင့်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ, ADHD, Disorders သင်ယူခြင်းများအတွက် Gene ၏ရွေးချယ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပါသလား?။ မျှော်လင့်ချက်သတင်းထုတ်, ဒွါတဲ, CA; 1996 ။
လာ DE: အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပြဿနာအပြုအမူ Syndrome။ အဆိုပါ Gene ဗုံး။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, ADHD, ကိုစှဲနှင့်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ Disorders သင်ယူခြင်းများအတွက် Gene ၏ရွေးချယ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပါသလား ?. မျှော်လင့်ချက်သတင်းထုတ်, ဒွါတဲ, CA; 1996 ။ စစ 91-94 ။
လာ DE: မျိုးဗီဇရွေးချယ်ရေး။ အဆိုပါ Gene ဗုံး။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, ADHD, ကိုစှဲနှင့်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ Disorders သင်ယူခြင်းများအတွက် Gene ၏ရွေးချယ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပါသလား ?. မျှော်လင့်ချက်သတင်းထုတ်, ဒွါတဲ, CA; 1996 ။ စစ 89-90 ။
လာ DE: အဆိုပါ Berkeley လေ့လာ။ အဆိုပါ Gene ဗုံး။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, ADHD, ကိုစှဲနှင့်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ Disorders သင်ယူခြင်းများအတွက် Gene ၏ရွေးချယ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပါသလား ?. မျှော်လင့်ချက်သတင်းထုတ်, ဒွါတဲကယ်လီဖိုးနီးယား; 1996 ။ စစ 105-210 ။
Borsten J ကို: Malibu သဲသောင်ပြင် Recovery ကိုအစားအသောက်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်။ Vidov ထုတ်ဝေရေး Inc မှ, Malibu,, CA; 2015 ။
Derbyshire KL, Grant က je: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2015, 4: 37-43 ။ 10.1556 / 2006.4.2015.003
Nirenberg MJ: Dopamine agonist ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ: လူနာစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ အိုမင်းခြင်းဟာမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2013, 30: 587-592 ။ 10.1007 / s40266-013-0090-z
Grant JE, Brewer JA, Potenza MN: ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology။ CNS Spectr ။ 2006, 11: 924-930 ။
Sakata K, Duke SM: ကမကထပြုသူ (IV) မှတစ်ဆင့် BDNF ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်တိုတိုတိုတို၏ရှေ့ဖက် cortex နှင့် hippocampus ရှိ monoamine ဗီဇများကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။။ neuroscience ။ 2014, 260: 265-75 ။ 10.1016 / j.neuroscience.2013.12.013
Blum K ကိုလျူ Y ကို, ဝမ် W က, ဝမ် Y ကို, Zhang က Y ကို, အော်စကာ Berman က M, Smolen တစ်ဦးက, Febo M က, ဟန်: D, Simpatico T က, Cronjé FJ, Demetrovics Z ကိုရွှေက MS: abstinent genotyped ဘိန်းဖြူစွဲ၏ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ် KB220Z ™၏ rsfMRI ဆိုးကျိုးများ။ Postgrad Med ။ 2015, 127: 232-241 ။
McLaughlin T၊ Blum K၊ Oscar-Berman M, Febo M, Demetrovics Z, Agan G, Fratantonio J, Gold MS: RDS လူနာအတွက်ကြောက်စရာ, Lucid အိပ်မက်ဆိုး ameliorate ဖို့ Neuroadaptagen KB200z ™အသုံးပြုခြင်း: အမြှင့်တင်ရန်, ဦးနှောက်-ဆုလာဘ်၏အခန်းကဏ္ဍ, functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနဲ့ dopaminergic homeostasis။ J ကို Defic Syndr ၌ဆပ်။ 2015, 1: 24-35 ။ 10.17756 / jrds.2015-006
Blum K ကို Thanos PK, Badgaiyan RD, Febo M က, အော်စကာ Berman က M, Fratantonio J ကို, Demotrovics Z ကိုရွှေက MS: ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါအတှကျအ Neurogenetics နှင့်မျိုးဗီဇကုထုံး: ငါတို့သည်ကတိထားရာမြေမှသွားမည်နည်း။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin Biol Ther ။ 2015, 5: 973-985 ။ 10.1517 / 14712598.2015.1045871
Joranby L ကို, Pineda-Frost က KY, ရွှေက MS: အစားအစာနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များကိုမှစွဲလမ်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2005, 12: 201-217 ။ 10.1080 / 10720160500203765
Edge PJ, ရွှေက MS: မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့် hyperphagia: ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေသင်ခန်းစာတွေကို။ Curr Pharm Des ။ 2011, 17: 1173-1179 ။ 10.2174 / 138161211795656738
Moholy M က, Prause N ကို, Proudfit, GH, Rahman ကတစ်ဦး, Fong သည် T-: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-စည်းမျဉ်းခန့်မှန်း။ Cogn Emotion ။ 2015, 6: 1012 ။
Prause N ကို, သံမဏိ, VR, Staley ကို C, Sabatinelli, D, Hajcak, G: "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation။ Biol Psychol ။ 2015, 109: 192-199 ။ 10.1016 / j.biopsycho.2015.06.005
Mechelmans DJ သမား, Irvine M က, BANCA P ကို, et al: နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014, 25,9(8): e105476 ။ 10.1371 / journal.pone.0105476
Blum K ကို Gardner, E, အော်စကာ Berman က M, ရွှေ M က: Reward Deficiency Syndrome (RDS) နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်“ Liking” နှင့်“ wanting” - ဦး နှောက်ဆုချခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်မှုကိုတွက်ချက်ခြင်း။ Curr Pharm Des ။ 2012, 18 (1): 113-118 ။
Hyman အရှေ့တောင်: အဆိုပါ DSM Diagnosing: Diagnostic ခွဲခြားရေးအခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုအပ်တာလဲ။ Cerebrum ။ 2011, 2011:6။ ဝင်ရောက်: 2011 ဧပြီ 26: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574782/.
ကာဇီ BJ, Craddock N ကို, Cuthbert BN, Hyman SE, Lee က FS, Ressler KJ: DSM-5 နှင့် RDoC: Psychiatry သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှု?။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2013, 14: 810-14 ။ 10.1038 / nrn3621
Karila L ကို, Wéryတစ်ဦးက, Weinstein တစ်ဦးက, Cottencin အိုအသနားခံစာတစ်ဦးက, Reynaud M က, Billieux J ကို: လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ: တူညီသောပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ? စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Curr Pharm Des ။ 2014, 20: 4012-20 ။ 10.2174 / 13816128113199990619
Carvalho J ကို, Štulhoferတစ်ဦးက, ဗီအဲရာ AL, Jurin T က: Hypersexuality နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ: ပြဿနာလိင်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2015, 12: 1356-67 ။ ဝင်ရောက်: 2015 မတ်လ 23: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsm.12865/abstract;jsessionid=6F416CCBB66B7F0EA28E428D4993EBD5.f01t04. 10.1111 / jsm.12865
Rettenberger M က, Klein V ကို, Briken P ကို: အဆိုပါ Hypersexual အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စရိုကျမြား။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015 ဇန်နဝါရီ 6: (EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏) ။ ဝင်ရောက်: 2015 ဇန်နဝါရီ 6: 10.1007/s10508-014-0399-7
Walters က GD, Knight ဟာ RA, Långström N က: hypersexuality ရှုထောင်လား? ယေဘုယျလူဦးရေနှင့်လက်တွေ့နမူနာကနေ DSM-5 အဘို့သက်သေအထောက်အထား။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011, 40: 1309-21 ။ ဝင်ရောက်: 2011 ဖေဖော်ဝါရီ 3: 10.1007/s10508-010-9719-8